Amakhaya e-Ernest Hemingway-Ngaphakathi kwe-Hemingway's Key West kunye ne-Cuba - Uhlobo Lodumo
Amakhaya e-Ernest Hemingway-Ngaphakathi kwe-Hemingway's Key West kunye ne-Cuba
Uhambo olungalungangaImifanekiso kaGetty
Ukuba bekukho into efana neNtaba iRushmore yoncwadi lwaseMelika, u-Ernest Hemingway ebeya kuba yinxalenye yalo. (Okanye, ubuncinci, singaphikisana kakhulu nokufakwa kwakhe.) IHemingway yayihambelana neenkwenkwezi zerwala ngexesha lobomi bakhe kwaye i-mystique yakhe yahlala ixesha elide emva kokufa kwakhe ngo-1961.
Ngelixa umsebenzi wakhe wawuchazwa zizivakalisi ezizezinye kunye nendoda eyindoda, izindlu zakhe zazinokuhonjiswa okutofotofo komntu oxabisa indlela ikhaya elinokuba yindawo yokuzimela eyamkelekileyo kwihlabathi. Kwiminyaka engama-61 yobomi, umbhali wabiza iindawo ezininzi ekhaya, kodwa amakhaya amabini aselunxwemeni aphawuleka ngokukodwa: enye kwi-Key West, eFlorida, kunye ne-Havana, eCuba.
Ikhaya le-Ernest Hemingway kunye neMyuziyam Ihlala kumazantsi e-Florida ilitye lekalika apho umbhali ahlala khona ukusukela ngo-1931 ukuya ku-1939. Indlu yanikwa uHemingway kunye nenkosikazi yakhe yesibini, uPauline, njengesipho somtshato kumalume wakhe.
umbala wepende ongathathi hlangothi kumagumbi okulala
USteve BlyImifanekiso kaGetty
Ngelixa silapha, uHemingway wabhala Iikhephu zaseKilimanjaro , Ubomi obufutshane obonwabileyo bukaFrancis Macomber , Ukuba unayo kwaye awunayo , kunye Iinduli zeGreen zaseAfrika . Kwisifundo sakhe, ungabona umatshini wokubhala awusebenzisileyo ukuba abhale le misebenzi.
Iindonga zazipeyintwe kwiplanga elimcaba elinemibala ethomalalisayo, elenza ikhaya lizive lipholile kwaye liqaqambile.
Elona xesha lilungileyo lokutyala oomama
IHemingway yayingumqokeleli omkhulu wenkulungwane ye-17 neye-18.
Ewe, naye iikati ezidumileyo . Kwi-Key West, wayenekati eneenzwane ezintandathu (egama linguSnow White). Inzala eninzi ihlala kumyuziyam ngolonwabo.
IBrent WinebrennerImifanekiso kaGetty
IHemingway wathenga ikhaya lakhe laseCuba , ogama lingu 'Finca Vigia,' ngo 1940. Eli gama liguqulela 'indlu yokukhangela.'
UPaul HarrisImifanekiso kaGetty
Ikhaya lalakhiwe ngo-1886 nguMiguel Pascual y Baguer. Ine-vibe eyahluke mpela kunendlu eyi-Key West, kodwa isazaliswe zii-antique Hemingway ezixabisekileyo.
Intyatyambo yomthi yentyatyambo
UJoachim Girg / STOCK4BImifanekiso kaGetty
Ukutyelela iHemingway, uRobert Manning (owayengumhleli we IAtlantic ) Wabhala ngegumbi lokuhlala : 'Igumbi lokuhlala laliphantse libe ziimitha ezingama-50 ubude kwaye linophahla oluphezulu, kunye nodonga olumenyezelayo olumhlophe olususa ingqokelela encinci kodwa ekhethiweyo yeHemingways (kubandakanya iMiró, ezimbini nguJuan Gris, uKlee, iBraque - okoko kubiwe villa-kunye no-André Masson abahlanu), iintloko ezimbalwa zentloko evela kwii-safaris zaseAfrika. '
UDELELAN YannImifanekiso kaGetty
IHemingway yayihlala eFinca Vigia inde kunezinye iindawo ahlala kuzo. Kulapho athe wamkela khona iNobel Peace Prize yoNcwadi kwaye wabhala Umthendeleko oShukumayo kwaye Indoda endala nolwandle , phakathi kweminye imisebenzi. Washiya isiqithi ngo-1960 - abanye, njengoko besitsho, yimbali.
Iipeyinti zodonga kwigumbi lokuhlala
Iindleko zeveranda ehlolweyo
Itafile ezimbini zokudlela
igumbi lokuhombisa lekrisimesi